देखभाल | Ratopati
महिनावारीका बेला बग्ने रगतले खोल्छ स्वास्थ्यको राज, यी संकेतलाई बेवास्ता नगर्नुहोस् access_timeजेठ १०, २०७९
महिनावारीका बेला हुने समस्यासँग सबै महिला जानकार छन् तर यतिबेला श्राव हुने रगतले तपाईंको स्वास्थ्य र रोगबारे धेरै कुरा बताउँछ । वर्ल्ड बैंकका अनुसार विश्वभरी दैनिक लगभग ८० लाख महिला महिनावारीबाट गुज्रन्छन् । महिनावारीका निस्कने रगतको रङले ब्याक्टेरियल संक्रमण, यौनज...
तौल कम गर्न चाहनेहरुले यी फल नखानुहोस् access_timeजेठ ९, २०७९
फल र सब्जीले शरीरलाई आवश्यक पोषक तत्व, भिटामिन, मिनरल प्रदान गर्छ त्यसैले यी दैनिक खान सल्लाह दिइन्छ । विज्ञका अनुसार हरेक व्यक्तिले बिहान ब्रेकफास्टमा एउटा फलफूल खानुपर्छ र हरियो सब्जीलाई खानामा समावेश गर्नुपर्छ । डब्ल्यूएचओकमा अनुसार जो व्यक्तिले हरेक दिन कम्तीम...
यी कुकुर विशेष छन् तर पाल्नका लागि हुनुहाेस् सावधान access_timeजेठ ८, २०७९
धेरै मानिसहरूले यी साना आकारका कुकुरहरूलाई ‘क्युट’ भनेर वर्णन गर्छन् । ‘पग’ भनिने यी कुकुरहरू ‘जनावर मनपराउनेहरु’ का लागि मन पर्ने कुकुर हुन् । तर स्वास्थ्यको मामिलामा यिनीहरु साधारण कुकुरभन्दा निकै भिन्न छन् । ‘...
दहीका छन् अनेक फाइदा तर कसले खानु हुँदैन ? access_timeजेठ ८, २०७९
गाई, भैंसीे, बाख्रा, ऊँट, याक र केही वनस्पतिको दूधबाट दही तयार गर्न सकिन्छ । वनस्पतिजन्य दूधमा भटमास, धान, नट्स, बदाम तथा नरिवल आदिबाट दही तयार गरिन्छ । यस्तो दही जनावरजन्य दूधमा पाइने ल्याक्टोज एलर्जी हुनेहरूको लागि र भेगान वर्गको लागि लाभदायक हुन्छ । दही प्रशोधित...
मङ्कीपक्स भाइरससँग के तपाईं चिन्तित हुनुपर्छ ? access_timeजेठ ७, २०७९
महामारीबाट पूरा विश्व अहिलेसम्म बाहिर निस्कन नसकेको अवस्थामा अर्को एउटा नयाँ भाइरसको चर्चा सुरु भइसकेको छ । मङ्कीपक्स, दशकौंदेखि अफ्रिकी मानिसहरूमा सामान्य रहेको रोग हो तर अहिले विश्वका अन्य देशहरूमा पनि फैलिरहेको छ । विशेष गरी अमेरिका, क्यानडा र धेरै ...
कसैलाई मोटो वा पुड्को नभन्नुहोस्, यस्ता व्यक्तिले तपाईंको ज्यानै लिन सक्छन्, थाहा पाऔँ यो कस्तो रोग ? access_timeजेठ ६, २०७९
हालै भारतको तमिलनाडुको कल्लाकुरिची जिल्लामा एउटा निकै अचम्मित गरिदिने घटना भएको छ । १२ कक्षाका एक विद्यार्थीले बारम्बार बडी सेमिङ गर्ने आफ्नै सहपाठीको हत्या गरिदिए । प्रहरीका अनुसार मृतक विद्यार्थीले आरोपीलाई बारम्बार जिस्काइरहन्थे । उनीसँगै स्कूलका अन्य विद्या...
युरोप–अमेरिकामा विफरजस्तै मङ्कीपक्स संक्रमण फैलिन थालेपछि स्वास्थ्यकर्मी सतर्क access_timeजेठ ५, २०७९
युरोप र अमेरिकाका स्वास्थ्य अधिकारीहरु मङ्कीपक्सको विस्तारले सतर्क रहन थालेका छन् । सन् १९७० को दशकमा पहिलो पटक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गोमा भेटिएको मङ्कीपक्स भाइरस अहिले युरोपमा देखिन थालेको छ । अमेरिकामा समेत पहिलो संक्रमण पुष्टि भएको छ । बुधबार पोर्च...
युरोपकै पहिलो : स्पेनले प्रस्ताव गर्‍यो महिनावारी हुँदा तलबी बिदा दिने कानुन access_timeजेठ ४, २०७९
स्पेनको वामपन्थी सरकारले मंगलबार महिला अधिकारलाई थप सबल बनाउने एक विधेयकलाई सार्वजनिक बहसमा लान स्वीकृति दिएको छ । विधेयकले गर्भवती महिलालाई गर्भपतनमा थप अधिकार सुनिश्चिता गरेको छ । यो कानुन पास भएमा महिनावारीको समयमा दुखाई महसुस गर्ने महिलाले तलबी बिदा ...
आमाबाबुका यी साना गल्ती : जसले बच्चालाई जिद्दी बनाउन सक्छ access_timeजेठ १, २०७९
हरेक अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई अनुशासित हुन सिकाउँछन् तर कहिलेकाहीँ अभिभावकको अत्यधिक लाड–प्यारका कारण छोराछोरी निकै जिद्दी हुन्छन् । यसले अभिभावकलाई निकै चिन्तित पनि तुल्याउने गर्छ । आमाबुवाको अत्यधिक मायाले बच्चालाई बिगार्न पनि सक्छ । जिद्दी बच्चालाई ...
सनस्क्रिन कि सनब्लक : यी बीच के भिन्नता छ र कुनको प्रयोग बढी प्रभावकारी ? access_timeबैशाख २८, २०७९
गर्मीको मौसम छ र यस्तो अवस्थामा धेरै मानिसहरूलाई घाममा बाहिर निस्कनु धेरै चुनौतीपूर्ण लाग्न सक्छ किनभने सूर्यको हानिकारक किरणले तपाईंको छालालाई धेरै हानी पुर्याउँछ । विज्ञहरुले घरबाट बाहिर निस्कँदा वा घरमै बस्दा पनि छालामा सनस्क्रिन वा सनब्लक लगाउन सुझाव दि...
बच्चाले चुइङ्गम चपाइरहेका छन् भने हुनुहोस् सावधान ! access_timeबैशाख २८, २०७९
कहिल्यै सोच्नुभएको छ ? बेलुन पनि कुनै बच्चाको मृत्युको कारण बन्न सक्छ, वा चुइङ्गम खाँदा पनि ज्यान जान सक्छ । प्रायः बालबालिकाले अभिभावकबाट यस्ता माग राख्छन्, जसले गर्दा उनीहरुमाथि कुनै अप्रिय घटना हुने गर्दछ । ती मध्ये बेलुन र चुइङगम पनि हुन् । बच्चाले बे...
आमा बन्ने सही उमेर कति हो ? के भन्छन् विज्ञ ? access_timeबैशाख २५, २०७९
आमा बन्ने सही उमेर कति हो ? खासमा भन्ने हो भने यो अति नै व्यक्तिगत प्रश्न हो । चिकित्सकीय रूपमा हेर्ने हो भने प्रत्येक महिलाको आफ्ना भिन्न भिन्न समस्या हुन्छन् । तर भारतकी स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. नन्दिनी पालशेतकरका अनुसार आमा बन्ने सबैभन्दा राम्रो उमेर २...
थाइरोइड रोगीका लागि दालचीनी निकै फाइदाजनक, सेवन गर्ने तरिका जान्नुहोस् access_timeबैशाख २५, २०७९
हामीमध्ये धेरैले दालचीनी खान्छौं । दालचीनी एउटा अचम्मको मसला हो जुन स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै लाभदायक हुन्छ । दालचीनी यसको औषधीय गुणहरूका लागि परिचित छ, जसले धेरै गम्भीर रोगहरूको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ । आयुर्वेदका अनुसार पनि दालचीनीलाई परम्परागत औषधिमा ...
शरीरमा जिंकको कमी हुँदा देखिन्छन् यस्ता ७ लक्षण access_timeबैशाख २४, २०७९
शरीरमा पोषक तत्वको कमीका कारण धेरै रोग लाग्ने खतरा हुन्छ । त्यसैले खानामा शरीरका लागि आवश्यक पौष्टिक तत्व हुनु अति आवश्यक हुन्छ । शरीरमा जिंकको कमी हुँदा पनि धेरै किसिमका समस्या हुने गर्छ । जिंकले शरीरलाई स्वस्थ राख्ने मात्र काम गर्दैन, यसको सेवन मस्तिष्कका ला...
दैनिक ओखर खाँदा पुरुषका थुप्रै समस्या हट्ने, खाने सही तरिका के त ? access_timeबैशाख २२, २०७९
ओखर एक प्रकारको ड्राइ फ्रुट हो जसमा ओमेगा थ्री हुन्छ । धेरैजसो मानिस यसको सेवन स्न्याक्सको रुपमा गर्छन् । ओखरमा एन्टिअक्सिडेन्ट गुण पाइन्छन् । ओखर खानु पुरुषका लागि निकै लाभदायक हुन्छ । पुरुषमा स्पर्म काउन्ट बढ्नेदेखि तालुपनाको समस्या कम गर्न ओखर निकै सहयोगी हुन्छ ...
अभिभावकका यी पाँच गल्ती जसले बच्चालाई बिगार्न सक्छ access_timeबैशाख २१, २०७९
आमा–बुवाले बच्चालाई माया–प्रेम दिएर हुर्कारहेका छन् भने यसलाई प्रशंसा गर्नैपर्छ तर उनीहरुलाई हुर्काउँदै गर्दा तपाईंले बच्चाका केही कुरा पनि बुझ्न आवश्यक छ । यसो गर्दा तपाईंको बच्चा भविष्यमा राम्रो व्यक्ति बन्न सक्नेछन् । कतिपटक बच्चालाई असाध्यै पुल्पुल्या...
टिभी हेरेर बिग्रिरहेको छ तपाईंको बच्चाको भाषा ? यसमाथि नियन्त्रण कसरी गर्ने ? access_timeबैशाख २०, २०७९
आजको आधुनिक समयमा बालबालिकाले पढाइ, खेलकुद र अन्य महत्वपूर्ण काममा ध्यान दिनुभन्दा टिभी र इन्टरनेटमा बढी समय दिन्छन् । टिभी र इन्टरनेटको दुनियाँमा आजकल बाल्यकाल कतै हराइरहेको छ । यो उनीहरूको शारीरिक र मानसिक विकासको लागि बिल्कुल राम्रो हुँदैन किनभने बालब...
कतै तपाईं तन्ना यति दिनमा त फेर्नुहुन्नँ ? हुनुहोस् सावधान ! access_timeबैशाख १९, २०७९
कति दिनमा आफ्नो तन्ना फेर्नुपर्छ वा धुनुपर्छ ? यो प्रश्न धेरैलाई महत्वपूर्ण नलाग्न सक्छ । धेरैले यो विषयलाई सार्वजनिक रूपमा छलफल गर्न नहुने पनि भन्न सक्लान् । तर यो हरेक मानिसलाई असर गर्ने विषय हो । बेलायतमा २,२५० वयस्कहरू बीचको हालैको सर्वेक्षणले ...
यदि बच्चाले गल्ती गरेका छन् भने गाली नगर्नुहोस्, यी ६ तरिकाले सम्झाउनुहोस् access_timeबैशाख १७, २०७९
गल्ती जोबाट पनि हुनसक्छ, चाहे बच्चा हुन् वा ठूला । तर बच्चालाई उनीहरुले गरेको गल्तीमा गाली भने गर्नुहुँदैन । उनीहरुले आफ्नो गल्ती महसुस गराउनुपर्छ तर भिन्न तरिकाले । बच्चालाई उनीहरुको आत्मविश्वास कायम राख्नेगरी र आफ्नो गल्तीले पाठ सिक्नेगरी सम्झाउनुपर्छ । बच्चाबा...
भिटामिन इ को कमीले यी गम्भीर रोगलाई दिन्छ निम्तो, यी लक्षण हुन् कमीका संकेत access_timeबैशाख १०, २०७९
साधारणतया हामी भिटामिन ए, बी, सी र डी लाई लिएर सचेत रहन्छौँ तर शरीरमा भिटामिन ‘इ’ वा ‘के’ को कमीले पनि थुप्रै घातक रोगको कारण बन्ने गर्छ । शरीरमा हरेक भिटामिनको आ–आफ्नै महत्व छ र यसले रोगबाट जोगाउँछ । भिटामिन इ को कमील...
स्यानिटरी प्याडको विकल्पको रुपमा उदाउँदै गरेको मेन्सट्रुअल कप आखिर के हो ? access_timeबैशाख ३, २०७९
महिलाको महिनावारीमा काम लाग्ने मिन्स्ट्रुअल कपको प्रोटोटाइप पहिलो पटक सन् १९३० को दशकमा आएको थियो । यसको पेटेन्टको पहिलो आवेदन सन् १९३७ मा अमेरिकी अभिनेत्री लियोना चामर्सले गरेकी थिइन् । पछिल्ला केही वर्षमा यसको अत्याधुनिक र उन्नत संस्करण बजारमा आएका छन् ।...
बत्ती निभाएर टिभी–ल्यापटप वा मोबाइल हेर्दा दिमागलाई लोड र आँखाको ज्योतिमा असर access_timeचैत २४, २०७८
हुन त फोन, ल्यापटप र टिभीमा जतिसक्दो कम समय बिताएकै राम्रो । तर त्यो समयलाई पनि यदि गलत तरिकाले बिताउने हो भने आँखादेखि तपाईंको स्वास्थ्यमा यसको असर पर्नसक्छ । फोनमा भएका क्यालेन्डर, क्यालकुलेटर, कन्ट्याक्ट्स र पढ्ने, लेख्ने, हेर्नेसँग सम्बन्धित यस्ता थुप्रै कुर...
कफी पिउँदा कम हुन्छन् यस्ता रोगको खतरा ! थाहा पाउनुहोस् कति कप कफी पिउनु फाइदाजनक access_timeचैत १८, २०७८
धेरै मानिस दिनको सुरुवात १ कप स्ट्रङ कफीबाट गर्न रुचाउँछन् । स्वादिलो र स्वस्थकर कफी पिउँदा शरीर ऊर्जावान् हुन्छ र यसले मुडलाई राम्रो बनाउँछ । हालै भएको अनुसन्धान अनुसार कफी सेवनले केही गम्भीर रोग जस्तै टाइप टु डायबिटिज, फ्याटी लिभर डिजिज र केही क्यान्सरबाट स...